7 Cunnada ugu Fiican Tours Si Experience In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Cunnada ugu Fiican Tours Si Experience In Europe
7 Cunnada ugu Fiican Tours Si Experience In Europe
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 30/01/2021)
Tag on tuurnimo in xanxantayn hari dhadhanka iyo ka qayb ah tours cuntada ugu fiican Yurub. Haddii aad tahay qof aad u xiiseeya foodie, aad dhanxanegga, iyo sidoo kale aad Instagram feed farxad boodi doonaa waxa aad la kulmi doonaan. Dabcan, habka ugu wanaagsan ee lagu booqdo magaalooyin caan ah oo loo yaqaan 'gastronomic genius caan' oo ku yaal Yurub ayaa ah tareen. Here are our top of 7 Cunnada ugu Fiican Tours Si Experience In Europe.
Tareen Gaadiidka Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. Tours Cuntada Si Experience In Europe: From Baguettes Si Bistro In Paris, France
Haddii uu jiro mid ka mid ah magaalada in garaaci kartaa sharaabaad aad iska leh hal-abuurka, Kuliyadda, waxa ee Paris iyo waa, Sidaa darteed, u horeeya liiska for tours cuntada ugu fiican Yurub. Sidaas darteed, tours badan cuntada in ay maamulaan ee Paris waa halkii loogu yeedhi waxbarashada cuntada maxaa yeelay, way armuu taariikhda. Caadooyinka la soo maray qarniyada oo dhan.
La waxyoonay by hamiday PSG.
Wax walba waa la daboolay laga waxyaabaha aasaasiga ah ee cunto iyo farmaajo in ay taxadir caan, foie GRAS iyo sidoo kale rillettes oo macmal ah iyo Armagnac. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad ka dheregno kartaa in PSG dhaqanka cafe.
Dabaylaha aad dhex marayay jidadka dhinac iyo naftaada yaabiyo at maqaayado inta dhimatay, kafateeriyada, Dalliga, iyo boulangeries waxaa jira. Sidaas darteed, waxaa lagugu soo bandhigi doonaa isku dhafka qumman ee cuntooyinka da'da ah iyo kuwa cusub iyo isbeddellada ka jira goobaha cuntada.
Amsterdam si Tareenadu Paris
London si Tareenadu Paris
Rotterdam si Tareenadu Paris
Brussels si Tareenadu Paris
2. Cuntada ayey iskugu: Amsterdam, Netherlands ayaa
Haddii aad rabto inaad aragto koox kala duwan ee Amsterdam iyo goobta foodie ay, sahamiyaan barxadaha iyo jidadka dambe ee Degmada Jordaan ah. Sidaas darteed, waxaad ka heli doontaa purveyors cunto wanaagsan u xiiseynayey in ay wadaagaan curiyay ay sidoo kale ku siin qaar ka mid ah muuqaal hodan dhaxal ahaan loogu badali lahaa magaalada Indonesian.
Waxaan ku talinaynaa in aad isku dayi pie tufaax at cafe 400-sano jir ah mid taariikhi ah, Cafe Papeneiland. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa bolse sigaar cabbin ka recipe qarnigii jir ah qoys ka dhigay iyo baranina jidka Dutch in la cuno cunna.
Brussels si Tareenadu Amsterdam
London si Tareenadu Amsterdam
Berlin si Tareenadu Amsterdam
Paris si ay Tareenadu Amsterdam
3. Art The Of Craft Bi'ir & Cuntada In Prague, Czech Republic
Haddii aad ku jirto Prague, sameeyo wixii hipsters samayn oo wuxuu ku raaxaysan a biir farsamada iyo sidoo kale a suuqa cuntada safar. xataa Waxaad qaadan kartaa safar la khabiir biir ah. Waxay ku farxi doonaan inay kuu qaadan on Pivo a (biirka) safar ka duwan wax kasta oo kale.
Dabcan, biir farsamada waxaa had iyo jeer ku riyaaqay by cunista doorashada yar cunto maxalliga ah. Intaa waxaa dheer, iyoWaxaad isku dayi kartaa ukunta iskooj ama bur Czech leh hilibka lo'da braised inuu magacaabo laakiin dhowr ka mid ah khasnadaha foodie ee Prague ee. Waa la hubo ah, liiska tours cuntada ugu fiican Yurub our.
Nuremberg in Prague Tareenadu
Munich in ay Tareenadu Prague
Berlin si Tareenadu Prague
Vienna si ay Tareenadu Prague
4. Tours Cuntada Si Experience In Europe: Caadooyinka Age-Old In Madrid, Spain
Waayo, quudhin foodie bonafide a, Madrid ma niyad jabin! Meander dhex Madrid oo ku kulmaya iibiya maxalliga ah iyo restaurateurs. Isku day khamri degaanka iyo faar ku farxaa taariikhiga Anton Martin Suuqa. Waxay leeyihiin qaar ka mid ah, ayaa muran la'aan, ka cheesecakes ugu fiican adduunka, qaar ka mid ah kuwaas oo lagu dubi jiray foornooyinkaaga boqol-sano jir ah.
5. Caraf The City From Gudaha An Aragtidooda: Venice, Italy
Ballansan safar haddii aadan rabin in la cararay in Venice. Book qof ogyahay tago iyo mooraal ee magaalada iyo sida ay u suurto gal looga fogaado dadkii badnaa oo aynu aad u hesho qaar ka mid ah GEMS qarsoon. Tusaale ahaan, qaadan kortaan gondola guud ahaan kanaalka ah in makhaayad baastada iyo cab galaas prosecco ka hor inta aadan hubi qaar ka mid ah baararka khamriga caan, caan ah oo leh Casanova ee maxaliga ah.
Milan in ay Tareenadu Venice
Padua in Tareenadu Venice
Bologna si ay Tareenadu Venice
Rome si ay Tareenadu Venice
6. Tours Cuntada Si Experience In Europe: International Cuntada Arag In Berlin The, Germany
goobta cuntada Berlin ee waa xaq on arrimuhu iyo dahab cuntada ee caalamiga ah, iyo natiijada, waa meesha ugufiican ee aad saaxiibo kuhesho markaad safreyso cunno cunno. dadka aan waxba keentaa wada fiicneyn sida cuntada sameeya.
Waxaan ku talinaynaa in aad ka fiirsan safar shakhsi cuntada la maxaliga ah meesha aad rogo kartaa gacmo iyo naftaada hagaajin iid dhaqanka, Berlin-style.
Haddii aadan rabin in ay sameeyaan wax kasta oo aad naftaada:
Fiiri Suuqa Turkiga ee Kreuzberg ama joogso (ama saddex) at meheradaha kala duwan oo dubayaasha.
Frankfurt inay Tareenadu Berlin
Leipzig in Tareenadu Berlin
Hanover in Tareenadu Berlin
Hamburg si Tareenadu Berlin
7. An Asaliga Foodie Experience: Vienna, Austria
Vienna waa jiidashada oo dhan, si kastaba ha ahaatee tani waxay si gaar ah si marka ay timaado dhadhankii. Waxay leedahay dhab ah u dareemi waana in aad bilowdo booqasho guri u classic Viennese kafeega. Laga soo bilaabo guriga qaxwaha, aad si ay Naschmarket caan ka dhigi kara, jawharad dhaqameed la kala duwan ee u gaarka ah dalka Austria oo ay ku jiraan cheese iyo khal.
Haddii aadan cunin bolse ka dibna qaadan PIC ah waxaa ka mid ah on garaam marka aad ku jirtid Wurstelstand, xitaa waxaa aad ahaayeen? 🌭But for dhabta ah, waxay leeyihiin bolse ugu yaabka badan! waxaa dhaq hoos qaar ka raagay Austria ee maqaasiinka taariikhi ah oo ay u dhan la joojiyo off si fiican u leh qaar ka mid ah macmacaan delish adigoo booqanaya a dukaan weyn shukulaatada. 🍫
Salzburg in Tareenadu Vienna
Munich in ay Tareenadu Vienna
Graz in Tareenadu Vienna
Prague in Tareenadu Vienna
Tours Cuntada Si Experience In Europe: Gunaanad
The tours cuntada ugu fiican Yurub ayaa loogu talagalay in ay si fudud u afuufaan maskaxdaada iyo dhanxanegga. Waxaa jira yaraanta lahayn fursadaha.
Meel kastoo aad tagtidba, dhirtuba iyada oo liiska ka mid ah tours ku doonayay inay haboon inaad.
Dooro waxa aad jeclaan lahayd in waayo-aragnimo iyo isticmaalka Save A tareenka waayo, aad u baahan tahay safarka tareenka.
Qaado Our Poll
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Cunnada ugu Fiican Tours Si Experience In Europe ” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / TR ama / es iyo luqado badan oo aad dooratay.
Foodie FoodScene FoodTour Instagram TrainsInEurope tareen safarka
Waxaan isku dayaan in ay ka hor ee xariiqa qallooca ayaa sii joogo, Waxaan horumarinta fikradaha kalifaya iyo sheekooyin in captivate dhageystayaasha iyo eryi hawlgelinta. Waxaan jeclahay in aan toos subax kasta iyo Maskax waxa waxaan ku qori doonaa maanta. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
10 Fasaxyada Fasaxa Ugu Fiican Yurub
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Luxembourg, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Europe Travel Xiligii Spring The
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, safarka Europe
10 Suuqyada Cunnada Ugu Fiican Dunida
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Xir module this
Ha ka tegin oo aan hadiyad - Hel Hadiyado iyo News !